Global Voices teny Malagasy » Miaka-peo Manohitra Ny Lalàna Henjana “Miady Amin’ny Fampihorohoroana” Ny Orinasa Sy Ireo Mpikatroka Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2016 9:00 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Norafetan'ilay mpanao lalàna Irina Yarovaya sy ny Senatera Ozerov Viktor ireo lalàna “anti-terorista” vaovao, ary fantatra fa nodinihana fanindroany sy fanintelony tamin'ny 22 Jiona, saingy nahemotra tamin'ny Zoma 24 Jona ny latsa-bato. Mitatitra  ny Meduza, tranonkalam-baovao mpanaramaso an'i Rosia fa hisy fiantraikany amin'ireo lalàna folo samihafa ny fanitsiana ary hanitatra ny fahefan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny hifehezana ny olom-pireneny sy hametra ny zo sivilin'izy ireo.
Nanao fanentanana manohitra ny fitomboan'ny fepetra fanarahamaso ao anatin'ny volavolan-dalàna ireo mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra Rosiana, ary nilaza fa ny famerana vaovao amin'ny fanafenantsoratra dia mahatonga ny lalàna ho “mampidi-doza bebe kokoa .” Nanatontosa fanentanana antserasera “Tsy Mila Fanarahamaso” tamin'ny alalan'ny fananganana tranonkala iray antsoina hoe 1984.live  tamin'ny fotoana nanaovana ny fandinihana voalohany ny lalàna vaovao ny RosKomSvoboda, fikambanana miaro ny fahalalahan'ny aterineto mikambana ao amin'ny Antoko Piraty ao Rosia. Nanaraka avy eo ny fanentanana amin'ny media sosialy  mivantana amin'ny manampahefanan'ny governemanta, mangataka azy ireo hanafoana ny fanitsiana. Nahaangona sonia maherin'ny 3.000 ny RosKomSvoboda tamin'ny fanangonan-tsonia manohitra ny lalàna nalefan'izy ireo tao amin'ny Duma [Antenimiera] Rosiana sy ny Minisiteran'ny Fifandraisana tamin'ny 21 Jiona, alohan'ny fandinihana fanindroany ny volavolan-dalàna.
Naneho ny ahiahin'izy ireo momba ny lalàna vaovao ihany koa ireo solontenan'ny orinasa ao Rosia. Nilaza  tamin'ny tranonkalam-baovao RBC ny mpitondratenin'ny Goavan'ny Aterineto Yandex fa “hitarika fitomboan'ny fandaniana eo amin'ireo orinasan'ny aterineto, ary hanakely loatra ny zon'ny orinasa sy ny mpiserasera” ny fepetra takiana amin'ny fitehirizana ny lahatahirin'ny mpiserasera sy ny fepetra iezahana hanalefahana ny fanafenantsoratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/02/84476/
 mampidi-doza bebe kokoa: https://rublacklist.net/18030/
 fanentanana amin'ny media sosialy: https://twitter.com/search?q=%23НетСлежке&src=typd